I-China RXY Series Wash-Sterilize-Gcwalisa-Seal Line Umkhiqizi Nomhlinzeki | UShinva
Ukucaciswa kwe-Vial: 1ml-100ml
Lokukhipha umthamo: 10-500 izitsha eziyisikhombisa / iminithi
Ukugcwalisa ukunemba: ≤ ± 1%
Ukuwashwa kwe-Ultrasonic + ukugeza okushintshanayo kwe-Water-Air
Izinhlobo zezinto ezisemqoka: ISIEMENS, GEMU, FESTO, ABB, Schneider, njll.
Izici Zokusebenza Okuyinhloko
* I-Vial Wash-Dry-Fill-Seal Production Line isetshenziselwa ukuwasha, ukuvala inzalo, ukugcwalisa nokufaka uphawu lomjovo omncane we-vial injection e-workshop. Ifaka ukwakheka okuthuthukile, ukwakheka okunengqondo, izinga eliphakeme le-automation, ukusebenza okuzinzile nokwethembekile, ukusebenza kahle kokukhiqiza kanye nokuhlanganiswa kwemishini nogesi. Izingxenye okuthintwe nazo uketshezi lwezidakamizwa zenziwe nge-AISI316L kanti enye yenziwe nge-AISI304. Izinto ezisetshenzisiwe azinakho ukungcoliswa kwezidakamizwa nemvelo. Umklamo nokukhiqiza konke kuhambisana ne-FDA ne-GMP entsha.
* I-Vial Wash-Dry-Gcwalisa-Seal Production Line yenziwe nge-Vertical Ultrasonic Washing Machine, Omiswe kanye ne-Ovenilization Oven, kanye ne-Vial Fill-Seal Machine. Ifaka ukuxhumana kokuxhumana, ukulawulwa kwejubane okungenasinyathelo nokulawula okunembile futhi kungahlangabezana nezidingo zenqubo yokukhiqiza.
* Ifaka isivinini esikhulu sokukhiqiza, izinga eliphakeme leziqu, alinawo umthelela, akukho senzo esingalungile, akukho ukucindezela nasezimbizeni eziphukile.
* Inamadivayisi ahlukahlukene okuphepha ukuqinisekisa ukuphepha komqhubi nomshini.
* Amachweba okuqinisekisa agodliwe ezingxenyeni eziyinhloko.
* Ifaka ukulawula kwe-PLC, ukusebenza kwesikrini sokukhiqiza nokukhiqizwa okuhleliwe.
* Amadivayisi weBuffer afakiwe endaweni yokuxhuma phakathi kwamayunithi amathathu entambo yokukhiqiza, ngaleyo ndlela ikwazi ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile nokuzinzile.
* Inomsebenzi wokungabikho kokugcwaliswa kwebhodlela.
* Inesistimu yokuphaka uwoyela eyodwa engangeza kalula uwoyela ezindaweni zokuthambisa.
ISHINVA Park C
Langaphambilini Okuzenzakalelayo Tray Carrier Ultrasonic Washers
Olandelayo: I-XH507 Unit Yamazinyo
I-LM Series Freeze Dryer
Uhlelo lwe-GV Series Automation